Miarabaha anao sy ny gasy tsy very rehetra ny tenako, ary miarahaba ny gasy tsy very rehetra, mirary soa sy fahombiazana ho atsika.
Nilaozan’olomanga itsika tao anatin’ny faraparany taona iny ,
mikasika an’i tompkolahy Jacque Chilla , fony izy ministre des affaires etrangeres, raha sendra nandalo teto Egypt izy sy presidant Zafy Albert
dia niezaka nandray ny solotenany Gasy teto Egypt.
Nisy fotoana izy niezaka niantso ny Gasy rehetra izay miisa 17
tamin’izany fotoana izany.Hainao avy hatrany fa olana no harosonay aminizay, izy kosa nandray anay tamin’ny fomba mipitehidera.
Tao amin’ny chambre tamin’i Hotel nipetrahany no nandraisany anay, ary norosoany voankazo isakarazany mamy dia mamy izahay. (mazotoa ianareo hoy izy ary miala tsiny fa izao no afaka naroso).
Teo amin’ny olana dia nangataka bourse avy @ fanjakana izahay ary novaliany fa mialatsiny fa ny firenena tsy afaka manome izany aminizao. Taminizany tsy mbola nisy net, dia nangataka gazety izahay. Ny namaliany anay : “izaho minisitra ary tsy mahazo gazety fa fax no vakiko”. Dia nomeny anay ny fax voavakiny..
Nisy taminireo rahalahy avy any Alexandrie, 200km avy eto Le Caire nitaraina olana manokana dia ny sarandalana satria hono raha naheno ny iray tonga amin’i Tanana hono ry zareo dia niezaka ny ho tonga eny fa na dia tsy nisy teo am-pelatanana, ary dia nanome ny avy aminy manokana Itompokolahy (tsy avy amin’i Fanjakana ity hoy izy fa avy amiko).
Aty egypt dia tsy misy ambassade de madagascar; eny fa consulat aza tsy misy ka mikasika ny olana teo amin’i tsirairay : “tsy mbola afaka mandefa maso ivoho ny firenetsika hoy izy fa izay manana olana dia ity ny adiresiko fa ho raisiko an-tandroa ny taratasinareo ary hataoko izay mety” . Ho anizay nanoratra aloha dia nototosainy tokoa.
Teo am-pamaranana nanazava sy nitantara ny fiainam-pirenena izy arapolitika,aratoekarena sns...
Vitsy dia vitsy no nanao izay taty egypt ka deraina izy.
Izay aloha fa amin’ny manaraka indray e!
GasyTsyVery avy ao EGYPTE
Contact: Olivier rakotomalalaeg@yahoo.fr